Soosaarida Lawsonia Inermis (Soosaarida Henna) Soo-saareyaasha, Soo-saareyaasha, Dhoofiyeyaasha Bolise
Lawsonia Inermis Warbixiinta (Henna Warbixiinta)
[Magaca Latin] Lawsonia inermis L.
[Faahfaahinta] 10: 1, 20: 1
[Ka koobnaan] Lawsone, Polysaccharide
1. Waxay horjoogsataa koritaanka bakteeriyada gram-positive iyo gram-negative.
2. Waxay muujisaa jawaab-celin bogsasho oo muhiim ah oo ka dhan ah jeexitaanka iyo boogaha la jeexay.
3. Waxay si toos ah u nuugtaa stratum corneum (maqaarka) isla markaana waxay ka ilaalisaa maqaarka shucaaca ultraviolet-ka.
4. Waa wakiilka haemolytic jilicsan oo daciif ah.
Ku saabsan Lawsonia Inermis Warbixiinta (Henna Warbixiinta)
Soo bixida Xannaanaadka waa noocyo badan oo adeegsi ah, isticmaalka ugu badan waxaa loo isticmaalaa sida timaha, maqaarka iyo ciddiyaha wasakheeyaan; Sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa marada iyo maqaarka midabbada maqaarka iyo kuwa wax ilaaliya; Henna waxay leedahay saameyn antifungal ah, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa sida geedo daawo ah.